९४ वर्षका विरामीको सफल अपरेशन « Loktantrapost
९४ वर्षका विरामीको सफल अपरेशन
१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०९:२६
विर्तामोड । उमेर ढल्किएका विरामीलाई उपचारको क्रममा प्राय अपरेशन गर्न चिकित्सकहरू मान्दैनन् । किनकि उमेरका कारण शरीरका अवयवहरू कमजोर हुने भएकाले अपरेशन गर्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
त्यसो त पाको उमेरमा अपरेशन गराउन विरामीका आफन्तहरू पनि मान्दैनन् । ‘झन् साह्रो वा कस्ट पो हुने हो कि’ भन्ने सोच स्वजनमा आउँछ । तर रोगले को पाको र को बाला भनेर पीडा कम वा बेसी दिने भन्ने हुँदैन । खुकुरीको चोट अचानालाई थाहा हुन्छ भने झैँ विरामीले रोगको असह्य वेदना सहनु परिरहेकै हुन्छ ।
ठिक त्यस्तै अन्योललाई चिर्दै विर्तामोडको वीएन्डसी टिचिङ हस्पिटलमा दुहागढी–६ का ९४ वर्षीय जयप्रसाद प्रसाइँको पित्तथैलीको पत्थरीको सफल भएको छ । सफल अपरेशन गर्ने डाक्टर टोलीको नेतृत्व गरेका छन् चर्चित सर्जन डा. रोहितप्रसाद यादवले ।
‘मेरो चिकित्सा सेवा जीवनमै सर्वाधिक उमेरका विरामीको अपरेशन मैले पहिलोपटक गरेको छुँ’, वीएन्डसी टिचिङ हस्पिटलका एसोसिएट प्रोफेसरसर्जन डा. यादव भन्छन्–‘कहिलेकाहिँ डाक्टरले जोखिम मोल्नै पर्ने हुन्छ ।’
पाको उमेरका विरामीको उपचार क्रममा अपरेशन गर्नै नहुने भन्ने हुँदैन । सय वर्ष उमेर पार गरेका विरामीको अपरेशन चिकित्सा इतिहासमा सम्भव भएका विश्व उदाहरण छन् । विरामीको व्लड प्रेसर, सुगर, मुटु तथा अन्य रोग भए अपरेशन जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
दुहागढीका ९४ वर्षीय जयप्रसाद प्रसाइँलाई ८४ वर्षकै उमेरदेखि पित्त थैलीको पत्थरीले सताएको उनका छोरा गोपीकृष्ण प्रसाई बताउँछन् ।
‘बुवालाई लामो समयसम्म विर्तामोडको एक होमियोमा उपचार गराइयो, पत्थरी पग्लेर जान्छ भनिएको थियो’, मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गोपीकृष्णले भने–‘तर निको हुनुको केही समय बितेपछि झन् गाह्रो पार्यो ।’
विराटनगरको गोल्डेन हस्पिटलमा पुर्याउँदा हस्पिटलले जयप्रसादको उमेर हेरेरै ‘अपरेशन गर्न नसकिने’ भन्दै विरामी फर्काइदिएको रहेछ । त्यसपछि मात्र प्रसाई परिवार विर्तामोडको वीएन्डसी आइपुगेको थियो ।
वीएन्डसी हस्पिटलमा सर्जन डा. रोहितप्रसाद यादवले पित्त थैली कुहिएको र भित्र पिप रगत छरपस्ट भइसकेको वास्तविकता पत्ता लगाए । अपरेशन बाहेक उपचारको विकल्प नभएको बताए पछि प्रसाई परिवार जोखिम भए पनि अपरेशन गर्न राजी भयो ।
सो अपरेशनमा डा. यादवसँग एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डा. अनिल ढुङ्गाना, सर्जन डा. दामोदर पन्त, एनेस्थेसियालोजिस्ट डा. निरु नेपाल र मुटुरोग विशेषज्ञ डा. महजर खान खटिएका थिए ।
‘परिवारका सदस्यको सदासयताले गर्दा नै हामीले जोखिम मोलेर अपरेशन सफल पार्यौँ’, डा. यादव भन्छन्–‘अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भइसकेको छ ।’ विरामीका परिवारले विश्वास गरिदिदा चिकित्सकलाई हौसला थपिने उनी बताउँछन् ।
हस्पिटलले अधिक उमेरका प्रसाईको सफल अपरेशन भएको विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हस्पिटलका मेडिकल डाइरेक्टर डा. उमेश शर्माले वीएन्डसी हस्पिटलले विस्तारै उपचारको क्षेत्रमा जनविश्वास जित्दै गएको बताए ।
सो अवसरमा हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले हस्पिटलले नयाँ सुविधा र प्रविधि थपेर मेची अञ्चलवासीको उपचारमा नयाँ फड्को मारिरहेको बताए ।
नेपाल सरकारले यस हस्पिटललाई टिचिङ हस्पिटलको रुपमा यही साउन ६ गते मन्त्रीपरिषद् स्तरको निर्णयबाट स्वीकृति प्रदान गरेको र ३०० वेड स्वीकृति दिएको जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल सरकारले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृति पाउने वीएन्डसी नेपालकै पहिलो हस्पिटल भएको उनले बताए ।
वीएन्डसीमा पनि यति धेरै उमेरको व्यक्तिको अपरेशन भएको यो नै पहिलो घटना भएको हस्पिटलका प्रिन्सिपल डा. उमेश शर्मा बताउँछन् । पत्रकार सम्मेलनमा डा. यादवले प्रसाईको उपचार प्रक्रियाको स्लाड शो प्रस्तुत गरेका थिए ।
(२०७३ साउन १२ गते लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)